Njengoba umfundi okhuthele?
Izinkumbulo izikhathi enkulisa, esikoleni noma enyuvesi njalo ukukhulisa ukumamatheka futhi amahlaya okuhle. Zazingekho nobunzima, izinkinga nsuku zonke imisebenzi yasekhaya kanye nakho yomndeni. Ngakho kungase kubonise kuphela umuntu omdala, kodwa kubonakala sengathi umntwana ukuthi akukho lutho kungaba nzima ukufunda.
Kanjani futhi kuphi kangcono ukufunda kusuka?
isikole kukhona engu kakhulu yegolide ukuphila awo wonke umuntu. Lapha sibona zikhula, thina zikhula; othile uthola uthando kuqala, bese kuba khona umuntu kuvula amathuba amasha futhi kubonisa ikhono elikhulu kunoma yimuphi umkhakha. Kodwa kokubili zenze kahle esikoleni futhi ziphumelele konke?
Izihloko abatadisha izingane kulesi sikole main, futhi ukuba khona kwabo unikeza ingane ithuba ukuthuthukisa ngokugcwele. Thishela uniketa izisekelo, njengoba kunesithembiso le Ukujwayelana umfundi ngendaba. Ngaphezu kwalokho, abantu abaningi bathi umbono ulwazi kuncike uthisha ngezindlela eziningi. Kufanele kube iyalalelisisa ekilasini, ukuze ungalahlekelwa lutho. Phela, uma athikanyezwe ofunda ukuphupha ngokuthize, bese umphumela kuyoba zero ukuqeqeshwa. Futhi ngenkathi umfundi okhuthele?
Abafundi kumele zithobele mthetho: Uma unemibuzo noma abaqondi into (ku isihloko esisha noma impahla wafunda), khona-ke kungcono uphakamise isandla sakhe futhi ubuze. Vumela uthisha ukuchaza umfundi futhi okungacaci ngaye isibonelo (umsebenzi, futhi ngokuvamile m. P.). Yeqa namuhla into eyodwa encane, kusasa kuzoba ayiqondakali izinto ezilandelayo. Izingane awubonakali wesabe oyisiphukuphuku noma underachieving, njengoba umsebenzi uthisha futhi, ukuthi ngabe ukufundisa emphakathini izingane ukuzivumelanisa nabo iqembu hhayi ukucindezela bangobani.
Ngokuvamile ungezwa okushiwo abazali: "Yeka indlela abaphumelela kahle ingane ukufunda uma uthisha sinesandla esiqine kakhulu." Ubunjalo uthisha akufanele iphazamise inqubo yemfundo. Uma ingane kunzima ukuqonda ulwazi kusuka umuntu onjalo, bese le nkinga uma athathe amanye kulelo abazali. Kakade izingane kuyoba sobala kakhulu uma into ukutshela umama noma ubaba. Ikakhulukazi uthisha ayikwazi ukushintshwa (kodwa ingcosana ungacabanga mayelana ekushintsheni umbhalo wekwatisa weliklasi).
Yiqiniso, izingane akuzona zonke ngokufanayo. Ngamunye abafundi, noma ngabe kuyinto umfundi A noma Abanqotshiwe okhuthele, lidinga indlela ekhethekile ukuheha kakhulu inqubo yemfundo. Phela, zonke izingane iyakhona, nje ikhono kulaba kufanele kubhekwe futhi sikhishiwe.
Kodwa indlela eyodwa kathisha akwanele ukuphendula umbuzo kanjani ukufunda kahle. Lapha kudingeka ukuba uxhume namandla sabazali. Lapho ingane eza ekhaya evela esikoleni, ibuze ukuthi kwenzekeni namuhla, yini entsha ayekufunda futhi wabona. Futhi ngisho noma ulwazi etholakale ngeke ezihlobene esikoleni, ngokushesha le ngane uzokutshela futhi izifundo kakhulu. Mdumiseni futhi sibekezele. Izingane uthando uma abazali benza nabo, ikakhulukazi uma inqubo ukuqeqeshwa kufana umdlalo.
Ake sithi wenza izibalo. Impendulo ngayinye lengiyo, ukhuthaze candy ingane, ithoyizi noma "inkanyezi honours." Izinkanyezi ezinjalo unamathele ebodeni eceleni kombhede. Lapho ingane ngeke ulale, wayengeke uqaphela kubo futhi baqonde ukuthi namuhla wazama kahle kakhulu, futhi kusasa izozama kube ngcono nakakhulu. Ngokwalesi simiso kanye nesidingo ukufundisa izingane ukuba inqubo yemfundo. Ngemva kwesikhathi esithile, umntwana isivele ejwayele kakhulu ukuzibandakanya ngaphandle ukukhuthazwa, kuyoba kuhle yenza kahle esikoleni.
Ukuze izingane zikhule kahle, ungalandi ke isayensi, ukufunda akupheli, ngokubhala. Kungcono kakhulu ukuba ngilinike noma iyiphi ingxenye, isibonelo, ejimini, ngesikhathi esikhungweni somdanso noma art esikoleni. Lapha izingane ukuxhumana nontanga yabo kusukela lonke inqubo yemfundo, kodwa ngesikhathi esifanayo ukuhlola nezinye. Ngakho-ke ngeke nentshisekelo ekufundeni nokunyamalala, njengoba usuku ngalunye ingane ukufunda okuthile okusha.
Yini esetshenziswa ubuchwepheshe impilo owasindisa enkulisa?
Uchungechunge lwezihloko ezithi "Vampire Diaries." Tayler Lokvud: Biography futhi umlando hero
"Crystal Boy" Sasha Pushkarev: Biography. Umlando wokutholwa
Izinganekwane Slavic. Field - umoya Amasimu
Black pasta: iresiphi ethile
Angel ukudla ikhekhe: iresiphi kanye igxathu negxathu izithombe
Feta ushizi: izinzuzo efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka komkhiqizo